BlueLock ဗွီဒီယို - Cloud Computing | Martech Zone
BlueLock ဗီဒီယို: Cloud Computing
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2008 တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 3, 2013 Douglas Karr
ကြီးမြတ်အင်တာဗျူးနှင့် cloud computing ၏ရိုးရှင်းသောဖော်ပြချက် on WishTV ငါ့သူငယ်ချင်း Brian Wolff နဲ့အတူ BlueLock.
၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းပညာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အင်တာနက်အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ Cloud computing အကြောင်းအနာဂတ်စာအုပ်ကောင်းကောင်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ် က Nicholas Carr ရဲ့ The Big Switch.
Favicon Generator: ဘာလို့ Favicon မရှိတာလဲ။
9:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 15
Big Switch ကို ကြိုက်တယ်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား ကွန်ပြူတာနှင့် အင်တာနက်ကို ကြည့်ရန် လုံးဝခြားနားသော နည်းလမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။ နည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ Cloud Computing ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည် အရွယ်အစားအားလုံးရှိ ကုမ္ပဏီများအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်။
ပြီးတော့ Brian က ဒီဗီဒီယိုမှာ ရှင်းပြတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။